မိမိရဲ့ Nintendo Switch eShop ဘောက်ချာကုတ်ကို ထည့်သွင်းလို့ မရပါ။ ဘာဆက်လုပ်ရပါမလဲ။ – Coda Payments Myanmar
Coda Payments Myanmar
ဂီမ်း နှင့် Application ဆိုင်ရာ ၀ယ်ယူမှု နည်းလမ်းများ
Garena Shellsဘောင်ချာကုတ်၁၆လုံး ဖြင့် Garena League Of Legends PC game RP အဖြစ်ပြောင်းလဲယူရန် လုပ်ဆောင်နည်း။
Rockstar Activation Code ကို ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲ
၀ယ်ယူထားသော Steam Game Code ကို အကောင့်ထဲ ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲ
Epic Games Product Codes ကို ဘယ်လို Redeem လုပ်ဆောင်ရမလဲ
Tom & Jerry: Chase ID ဘယ်မှာကြည့်ရမှာလဲ?
Mixu IDကို ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ?
ZEPETO ID ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ?
Tumile ID ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ?
Livu ID ကို ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ?
Cooking Battle ID ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ?
မိမိရဲ့ Nintendo Switch eShop ဘောက်ချာကုတ်ကို ထည့်သွင်းလို့ မရပါ။ ဘာဆက်လုပ်ရပါမလဲ။
မိမိရဲ့ Nintendo Switch eShop ဘောက်ချာကုတ်ကို ထည့်သွင်းရာတွင် အောက်ပါ Error များထဲမှာ ရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါလမ်းညွှန်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
ပထမဦးစွာ မိမိထည့်သွင်းထားသော Voucher Code နံပတ် မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပေးပါ။
Codashop မှ သင်ဝယ်ယူထားသည့် သင့်ရဲ့ Email ကို ပို့ထားသော Voucher Code သည် နံပတ် ၁၆ လုံး ပါရှိပါသည်။
တချို့သော နံပတ်များသည် မှားယွင်းစွာဖတ်မိနိုင်ပါသဖြင့် သင်ဖတ်ရတာ မသေချာလျင်အောက်ပါအတိုင်း ထည့်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျ။ ( ဥပမာ။0သည် 8 နဲ့ မှားနိုင်သလို5သည်2နဲ့ မှားနိုင်ပါသည်။ )
Error Code: 2813-0055
သင်သည် ဒီError နံပတ်ကို ရရှိပါက ထိုerror ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ သင်ဝယ်ယူထားတဲ့ ဘောက်ချာကုတ်၏သက်တမ်းသည် ကုန်ဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ် Nintendo ဘက်မှ ထိုဘောက်ချာကုတ်အား အသုံးပြုရန် တရားဝင် မထုတ်ပြန်ရသေးတာ ဖြစ်ပါသည်။
Game software များအနေဖြင့် သူတို့ရဲ့ release date တွေဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။
သင်ဝယ်ယူလိုသည့် game software သို့မဟုတ် DLC အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဂီမ်းရဲ့ page ကို Nintendo Switch eShop မှတဆင့် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို ဂိမ်းSoftware or DLC သည် သက်ဆိုင်ရာ ဂီမ်းဘက်မှ ၀ယ်ယူခွင့် ရပြီဆိုလျှင်တော့ သင်ဝယ်ယူထားသည့် Voucher Code ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ( မှတ်ချက် ဘောက်ချာကုတ် သက်တမ်း မကုန်ဆုံးရသေးခင် အသုံးပြုရပါမည်။)
Nintendo Switch Online membership အတွက် ၀ယ်ယူမှုကိုတော့ သင်ဝယ်ယူထားတဲ့ နိုင်ငံအတွက်သာ အသုံးပြုလို့ ရပါမယ်။
Error Code: 2813-6838 (Prepaid Card Not Working)
မိမိ ထည့်သွင်းထားသည့် Nintendo eShop Voucher Code သည် မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ဤ Error ဆက်လက်ရရှိပါက မိမိထည့်သွင်းနေသော Voucher Code သည် Activate လုပ်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေတဲ့ Voucher Code ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ၂၄ နာရီ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးပါ။
Error Code: 2811-6058
သင်သည် ဒီError နံပတ်ကို ရရှိပါက ထိုerror ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ Voucher Code ကို အကြီမ်များစွာ မှားထည့်မိသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အချိန်ခဏစောင့်ပြီးမှ နောက်ထပ် ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
အထက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပြီး အဆင်မပြေဖြစ်နေသေးပါက ကျနော်တို့ မြန်မာ ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကို ဒီ http://bit.ly/mmCODAform မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ မြန်မာ ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့မှ ကူညီဖြေရှင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
League Of Legends: Wild Rift အတွက် Wild Core ၀ယ်ယူရာတွင် Error ပြနေပါသည်။ ဘာဆက်လုပ်ရပါမလဲ